ကလေးများတွင်ဖြစ်တတ်သော သွေးတိုးရောဂါ - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon မှ ရေးသားသည်။ 13/09/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
သွေးတိုးရောဂါကို hypertension လို့လည်းခေါ်ပြီး သွေးကြောတွင်းဖိအားက တက်လာကာ သွေးကြောနံရံကို တွန်းကန်တဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ နှလုံးဟာ သွေးလွှတ်ကြောနှင့် စီးဆင်းနေတဲ့ သွေးတွေကနေ လာတဲ့သွေးကို ညှစ်နေတာကြောင့် သွေးဖိအားဟာ မိနစ်တိုင်း အမြဲပြောင်းနေတတ်ပါတယ်။
ကလေးအတွက် သွေးတိုးရောဂါကို လိင်တူ၊ အသက်အရွယ်နှင့် အရပ်တူနေသော အခြားကလေး 95 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ တူညီတဲ့ သို့မဟုတ် ပိုကြီးတဲ့ သွေးဖိအားရှိခြင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ကလေးတွေက ကြီးထွားလာပြီး သွေးဖိအားကလည်း ပြောင်းလဲတတ်တာကြောင့် ကလေးတွေအတွက် ပုံမှန်သွေးပေါင်ချိန် သတ်မှတ်ဖို့ ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်က တခြားကလေးတွေရဲ့ပုံမှန်သွေးပေါင်ချိန်နှင့် သင့်ကလေး၏သွေးဖိအားကို နှိုငိးယှဉ်ပါလိမ့်မယ်။
ကလေးများအတွက် သွေးဖိအားများနိုင်တဲ့ အန္တရာယ် အများအပြား ရှိပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေလိုပဲ အဝလွန်ခြင်း၊ အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခြင်း စတာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ လူနေမှုပုံစံ ပြောင်းလဲပေးတာက ကလေးတွေအတွက်သွေးတိုးခြင်းကိုလျှော့ချဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယိ။ ကုသမှုမရှိဘူးဆိုရင် ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကလေး သွေးတိုးရှိတယ်လို့ သံသယရှိလျှင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြရန်အရေးကြီးပါတယ်။
အဖြစ်များတဲ့ လက္ခဏာနှင့် ရောဂါလက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ?
အထူးသဖြင့်ကလေးငယ်များမှာ ရောဂါလက္ခဏာတွေမဖြစ်ပေါ်စေပါ။ ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်စပြုလျှင် ကလေးခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံပြောင်းလဲခြင်း၊ နှာခေါင်းသွေးလျှံခြင်း၊ နှလုံးနှုန်းမြန်ခြင်းနှင့် ပျို့ချင်တာတွေ တွေ့ကြုံနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကလေးက ဒီရောဂါလက္ခဏာတွေ ရှိလျှင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ ဆရာဝန်ကို ပြသသင့်သလဲ?
အောက်ပါ အောက်ခံကျန်းမာရေးပြဿနာသို့မဟုတ် သွေးတိုး လက္ခဏာတွေရှိလျှင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်ပါတယ်။ ၃နှစ်အရွယ်ကစပြီး သင့်ကလေး၏သွေးပေါင်ချိန်ကို ပုံမှန် စစ်ထားရပါမယ်။ ဆရာဝန်များကအကြံပြုထားသည့်အတိုင်း လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ သင့်ကလေးကို လုပ်ခိုင်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါ ဖြစ်နိုင်သော အခြေအနေရှိနေလျှင် သွေးပေါင်ချိန်စစ်ဆေးမှုများကို နို့စို့အရွယ်ကာလအတွင်းစတင်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လမစေ့ခြင်း၊ ပေါင်မပြည့်ခြင်း၊ မွေးရာပါနှလုံးရောဂါနှင့် ကျောက်ကပ်ပြဿနာ ရှိတဲ့ ကလေးတွေဆို ပိုသတိထားသင့်ပါတယ်။ သင့်ကလေးအဝလွန်ရောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်း သင့်ဆရာဝန်က ပိုပြီးသွေးဖိအား စစ်ဆေးမှုလုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။
ဆရာဝန် ဆေးလာကုတဲ့အခါ သင့်ကို မေးခွန်းတွေမေး နိုင်ပါတယ်။ မေးခွန်းအချို့ကတော့ –
သင့်ကလေးမှာ မိသားစုမှာ ကိုလက်စထရောမြင့်မားခြင်း ၊သွေးတိုး သို့မဟုတ်နှလုံးရောဂါ မိသားစုရာဇဝင်ရှိပါသလား?
သင့်ကလေး သွေးပေါင်ချိန်ကို ဘယ်အချိန်မှာ နောက်ဆုံး စစ်ဆေးထားလဲ? သွေးပေါင်ချိန်ဘယ်လောက်လဲ? စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမေးခွန်းတွေကို ရက်ချိန်းမတိုင်ခင် ကြိုအဖြေရှာထားတာက ဆရာဝန်ကို သိချင်တာတွေ ပိုမေးလို့ရပြီး ကလေးအခြေအနေကို ပိုသိနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံ အချိန်တိုတယ်လို့ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်သင့်လျော်တဲ့ ကုသမှုပေးဖို့ အချက်အလက်အများကြီးစုဆောင်းဖို့ လိုပါတယ်။ ဤအချက်တွေက သင့်ဆရာဝန်က ကလေးအတွက် ကုသကောင်းကောင်း ပေးနိုင်အောင် အကြံပြုချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ရောဂါလက္ခဏာ သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့အချက်များရေးချပါ။ သွေးတိုးတာဟာ အမြဲရောဂါလက္ခဏာ မပြပေမယ့် ကလေးမှာ နှလုံးရောဂါနှင့် အခြားကလေးရောဂါတွေ ရှိတယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်ကို အသိပေးနိုင်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အဓိက အချက်အလက်များကိုချရေးပါ။ သွေးတိုး၊ ကိုလက်စထရောတက်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆီးချိုရောဂါ စတဲ့ မိသားစု ရာဇဝင်တွေ ရေးထားနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာ သင့်ကလေး သောက်နေသမျှ ဆေးဝါး၊ ဗီတာမင် သို့မဟုတ် ဖြည့်စွက်စာ အားလုံး ပါဝင်ပါတယ်။
မိသားစုဝင် သို့မဟုတ် မိတ်ဆွေတစ်ဦး ခေါ်သွားပါ။
ရက်ချိန်းပြနေစဉ်အတွင်း သင်တို့ကို ပြောပြတဲ့ အချက်အလက်တွေအားလုံးကို သတိရဖို့နှင့် နားလည်ဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ အတူပါလာတဲ့သူက သင် မကြားလိုက်တာ သို့မဟုတ် မေ့သွားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုသတိရပါလိမ့်မယ်။
သင့်ဆရာဝန်က သင့်ကလေး၏ အစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအလေ့အထများကို ပြောပြဖို့ တောင်းဆိုလာနိုင်ပါတယ်။
ဆေးခန်းပြနေစဉ်မှာ သင့်ကလေးအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင် သိလိုသည့်မေးခွန်းများကိုမေးပါ။
သင်နားမလည်တဲ့အရာကိုရှင်းပြဖို့ သင့်ဆရာဝန်ကိုမေးရန်မကြောက်ပါနှင့်။ အချက်အလက်တွေ အများကြီးဖြစ်နေတတ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ မသိလိုက်တာတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန် သင့်ကို ပြောပြသမျှ အရာအားလုံးကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါတယ်။
ဖြစ်စေတတ်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေက ဘာတွေလဲ?
ကလေးများအတွက် သွေးတိုးရောဂါဟာ မကြာခဏ အခြားကျန်းမာရေး အခြေအနေများနှင့် ဆက်စပ်နေလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီအခြေအနေများကတော့ နှလုံးချွတ်ယွင်းမှု၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ မျိုးဗီဇအခြေအနေများ သို့မဟုတ် ဟော်မုန်းမူမမှန်ခြင်း စတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အများစုသော သွေးတိုးတွေကတော့ ကိုယ်အလေးချိန်တက်တာကြောင့်ဖြစ်ရပါတယ်။ သင့်ကလေးကို ကျန်းမာသောအစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတွေ ဆက်လက်ပြုလုပ်ပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလို လူနေမှုပုံစံ အပြောင်းအလဲတွေက သင့်ကလေးကို အဝလွန်ခြင်းမှတားဆီးနိုင်ပါတယ်။
အန္တရာယ်ပေးနိုငိတဲ့ အချက်များက ဘာတွေလဲ?
သွေတိုးရောဂါက အောက်ပါအမျိုးအစားများပေါ်မူတည်ပြီး သင့်ကလေးကို ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။
Essential hyper tension လို့လည်း သိထားတဲ့ primary hypertension က နောက်ခံအကြောင်းရင်းမလိုပဲ သူ့ဘာသာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအမျိုးအစားဟာ အရွယ်ရောက် ကလေးများနှင့်လူငယ်များမှာ ပိုပြီးမကြာခဏတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီသွေးတိုးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေ များစေသော အချက်များကတော့
– အဝလွန်ခြင်း (BMI 25 အထက်)
– သွေးတိုးရောဂါ မိသားစုရာဇဝင်ရှိခြင်း
-ဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစား2သို့မဟုတ်မြင့်မားသော သွေးတွင်း သကြားဓါတ်အဆင့်ရှိခြင်း
– ကိုလက်စထရောနှင့် triglyceride ပမာဏမြင့်နေခြင်း
secondary hypertension ကတော့ အောက်ခံကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်များတွင်ပိုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကလေးမှာ secondary hypertension ရှိနေပါက အောက်ပါအခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။
– ကျောက်ကပ် ရေအိတ်တည်ရောဂါ
– နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းသလို နှလုံးပြသနာများ
– Adrenal ဂလင်း ပုံမမှန်ခြင်း
– ကျောက်ကပ် ထိခိုက်သောအခြေအနေများ
-Adrenal gland အတွင်း အကျိတ်ဖြစ်ပေါ်သည့် ရှားပါး Pheochromocytoma ရောဂါ
– ကျောက်ကပ် သွေးလွှတ်ကြောကျဉ်းရောဂါ (renal artery stenosis)
သင့်ကလေးသွေးတိုးရောဂါကို အမြဲ ကုသနေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ လူနေမှုပုံစံ ပြောင်းလဲမှုများ ဥပမာ အစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်း သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကုထုံးများ ပေါင်းစပ်ကုသနိုင်ပါတယ်။ မကုသပဲထားခဲ့ရင် သင့်ကလေးမှာပိုဆိုးတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အဖြစ်များတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာကတော့ အိပ်ပျော်နေစဉ်အသက်ရှူကျပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ပျော်စဉ် ဟောက်တာ သို့မဟုတ် အသက်ရှူပုံ မူမမှန်တာကို sleep apnoea ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဝလွန်နေသော ကလေးငယ်များတွင်ပိုမို အဖြစ် များပါတယ်။ သင့်ကလေး အိပ်ပျော်နေချိန်မှာ အသက်ရှူပြသနာတွေ ရှိမရှိ အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။
ကလေး သွေးတိုးရောဂါကို ထိန်းချုပ်မရတဲ့အခါ လူငယ်ဘဝထိ ဆက်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အောက်ပါ အန္တရာယ်တွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်:
ဒါကြောင့် တတ်နိုင်သမျှစောစော ကုသဖို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။ ဒီပြသနာတွေကို ဘယ်လို တားဆီးဖို့ဆိုတာသိနိုင်ဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
သင့်ကလေးရဲ့ သွေးတိုးရောဂါကို ဘယ်လို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သလဲ?
သင့်ကလေး ကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ လူနေမှုပုံစံ အပြောင်းအလဲများလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာနဲ့ ညီညွတ်သောအစားအစာများကျွေးပြီး သင့်ကလေးကို မှန်မှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ အားပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကလေးအခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး သင့်ဆရာဝန်က ဆေးပေးပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ကလေးကို ညွှန်ကြားပေးတဲ့ ဆေးဝါးများကို နားလည်ပြီး ဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဂရုတစိုက်လိုက်နာရန်အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်ကလေးကို ဆေးသောက်မပျက်အောင် သတိပေးပါ။ အိမ်မှာ သွေးပေါင်ချိန်စက် ကောင်းကောင်းရှိဖို့လို ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကသင့်ကလေး သွေးဖိအားကို စောင့်ကြည့်ပြီး ဒိုင်ယာရီထဲမှာ ထည့်ရေးထားနိုင်ပါတယ် ။ ဒီအရာကို ဆရာဝန်ပြတိုင်းယူသွားပါ။
Healthy weight: Tips for parents. Centers for Disease Control and Prevention. http://www.cdc.gov/healthyweight/children/index.html. Accessed Nov. 14, 2012